बेलायतको जनसंख्या छ करोड ६० लाख नाघ्यो, वृद्धिदर भने न्यून
लण्डन । बेलायतको जनसंख्या छ करोड ६० लाख नाघेको तथ्य औपचारिक रुपमा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१७ को जुनको अन्त्य देखि अहिले सम्ममा तीन लाख ९२ हजार जनसङ्ख्या थपिएको छ ।
इङ्ल्याण्ड, स्कटल्याण्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्याण्डबाट थपिएका ती व्यक्तिहरूसहित अहिले बेलायतको कुल जनसंख्या छ करोड ६० लाख ४० हजार २२९ पुगेको छ ।
पहिलाको र अहिलेको जनसङ्ख्याको तुलना गरेर हेर्दा कुल जनसंख्या वृद्धिदर भने ०.६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यो वृद्धिदर सन् २००४ को मध्यदेखि अहिले सम्मकै सवैभन्दा कम रहेको बताइएको छ ।
सन् २०१६ को जुनको अन्त्यसम्ममा बेलायतको जनसङ्ख्या पाँच लाख ३८ हजार वृद्धि भएको थियो । जुन सन् १९४८ देखिकै सवैभन्दा धेरै वृद्धि थियो ।
अहिले वृद्धि भएको मध्ये ४१ प्रतिशत प्राकृतिक वृद्धि हो । जन्मेकाको संख्याबाट मृत्यु भएकाहरूको सङ्ख्या घटाउन देखिने वृद्धिलाई प्राकृतिक वृद्धि भनिन्छ । त्यसबाहेक अरु ५९ प्रतिशत भने बसाईसराइका कारण बृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सन् २०१७ को मध्यसम्म पाँच लाख ७२ हजार जना बसाइसराइ गरेका थिए । सोही अवधिमा ३४ हजार दुई सय जनाले मुलुक छाडेका थिए । जबकि अघिल्लो बर्ष सोही अवधिमा २८ हजार जना देशबाट बाहिरिएका थिए ।
देश भित्रिने र देश छाड्नेहरूको जनसंख्याका आधारमा हेर्दा आप्रवासीहरूको जनसङ्ख्या नौ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
जनसङ्ख्या वृद्धि र बसाइँसराइको तथ्याङ्क यस्तो हुनुमा यूरोपेली यूनियनबाट बेलायत बाहिरिनु नै मुख्य कारण भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
बेलायतमा बसाइँ सर्नेहरूमध्ये सवैभन्दा धेरै रोमानियाली रहेका छन् । उनीहरूको संख्या ५० हजार रहेको छ । त्यसपछि चीन, भारत, फ्रान्स र पोल्याण्डका पनि धेरै आप्रवासी बेलायतमा बसोबास गर्छन् ।
प्रशिक्षक उर्गेन क्लपलाई नियुक्त गर्ने बार्सिलोनाको सपना !
एजेन्सी । बार्सिलोनाले बितेको केही वर्षमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन । यस सिजन बार्सिलोनाको खेलबाट फ्यानहरु उत्तिकै निराश रहेका छन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार बार्सिलोना नयाँ प्रशिक्षक निय
महेश मान्जेकरले जिते क्यान्सर
एजेन्सी । चर्चित अभिनेता एवं फिल्म निर्माता तथा निर्देशक महेश मान्जेकर क्यान्सरमुक्त भएका छन् ।
काठमाडौँ । सप्तरीको खडक नगरपालिका– ७ कल्याणपुर चोकमा भएको दुर्घटनामा घाइते एक महिलाको बुधबार मृत्यु भएको छ। पूर्व–पश्चिम लोकमार्गस्थित कल्याणपुर चोकमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको को. १ख ७७